Архитектура, Скульптура | Полезная информация для всех - Часть 7
Topic: ဗိသုကာပညာ, ပန်းပု
Скульптурный портрет и бюст — это одно и тоже или нет?
Скульптурный портрет и бюст — это одно и тоже или нет? Бюст — От (фр. buste, и итал. busto — туловище, торс) — подгрудное, реже поясное или от плечное изображение…
Сейды — чудо природы или дело рук человеческих?
Сейды — чудо природы или дело рук человеческих? Сейды это древние священные камни саамов, племени, проживающего на территории Карелии ещ с 1-го тысячелетия до нашей эры. Саамы древний народ, обладающий…
မော်စကိုမြို့ရှိပြပွဲရေးစင်တာမှဗဟိုဝင်ပေါက်၏ Arch ။ ပန်းပု၏စာရေးဆရာကားအဘယ်သူနည်း စင်တီမီတာ။ ရုပ်ပုံလွှာ
မော်စကိုမြို့ရှိပြပွဲရေးစင်တာမှဗဟိုဝင်ပေါက်၏ Arch ။ ပန်းပု၏စာရေးဆရာကားအဘယ်သူနည်း စစ်ပွဲပြီးနောက်စင်တီမီတာ။ ရုပ်ပုံ Kesha Miller က VSHV, အဆောက်အဦးလိုအပ်ပြုပြင်။ ဗိသုကာ, ပါမောက္ခ, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိသုကာပညာရှင် VSHV အေ၏ပညာရှင်များ၏ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကြီးကြပ် ...
အဆိုပါ iso ကဘာလဲ?
အဆိုပါ iso ကဘာလဲ? ရုရှားဘာသာစကားပြင်ဆင်ရန်ပြင်ဆင်ရန်ဝီကီ tekstPredlog အတွက်ဆင်ခြေအမျိုးမျိုးရှိသမျှပုံသဏ္ဍာန်; ရှေ့ဆက် i-, ဖျောညှနျးစခွေငျးငှါ: ဂရိကနေဆင်းသက်လာတဲ့ရှေ့ဆက်။ တန်းတူနှင့်တူညီနေမှု, တန်းတူညီမျှမှုကိုညွှန်း။ ဥပမာ, တစ်ဦးပုံလိုင်း isomers, isotropy နှင့်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ...
အိုင်ဗင် Rudskoy ကားအဘယ်သူနည်း
အိုင်ဗင် Rudskoy ကားအဘယ်သူနည်း5400 361 (17.12.2015) ivangay စိတ်ဝင်စားဖို့ဗီဒီယိုများတွေအများကြီးကြာတဲ့သူလူကြိုက်အများဆုံးဗီဒီယိုကဘလော့ဂါဖြစ်ပါတယ်။ သူပေးသော 16 နှစ်ပေါင်းတစ်ရည်းစားမာရီယာနာ Ro (မာရီယာနာ Rozhkov) ရှိပါတယ် ...
အဆိုပါရုပ်တုဝိုင်းတစ်ခုမှာအဘယ်မှာရှိသနည်း ငါ poguglyuupydy သွားပါ, မသိရပါဘူး: အိုးလန်ဒန်မြို့ရှိဗြိတိသျှပြတိုက်တွင်, V ကိုအလယ်၌နထေိုငျသူပန်းပုဆရာ Myron ၏အလုပ်ဟုယူဆသောကြေးဝါနယူးဂျာစီပြည်နယ်မူရင်းဝိုင်းတစ်ခုမှာရုပ်ထုအတွက် ...
3 давида На самом деле их4В течение двухсот лет в Италии появились четыре полностью различных статуи Давида и все — шедевры. Донателло, Верроккио, Микеланджело, и наконец Бернини. Отказавшись…
ပန်းပု Gudona- "ဗော်တဲယား"
Скульптура Гудона-"Вольтер" Вольте#769;р (фр. Voltaire; 21 ноября 1694, Париж, Франция 30 мая 1778 ) Портрет Вольтера в тоге Гудон, Жан Антуан Франция. 1778 г. Мрамор. 58 см Источник поступления в…
ယခင်စာမျက်နှာ စာမျက်နှာ 1 ... စာမျက်နှာ6စာမျက်နှာ 7
51 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,209 စက္ကန့်ကျော် Generate ။